Opinions Archives - Page 2 of 4 - somalilandlivemedia
4. Nov 2018 0
Garxajis Madaxwayne Nimadayda ha Aqoonsado! Muuse Biixi , Somalilandta kala dhaqaaqday SomalilandLive Media / iyada oo ay Maalimba Maalinka kadanbaysay ay Somaliland Xaalad Cakiran siigalayso ayaa...
11. Aug 2018 0
Sida aynu ka warqabno waxaa dhawaanahan bulshada Soomaalida dhexdeeda aad u hadal haysay wararkii ka imanaayey dhinaca maamulka gobolka shanaad ee Soomaalida Itoobiya, Halkaas oo khilaaf xoogani soo k...
Hishiiskii Beelwaynta Garxajis! Tolwanaaje SHAXDA DHABTA AH EE U DHAXAYSA GARXAJIS IYO JEEGAANTA. Wacanoo wanaagsan akhyaareey idil ahaantiinba, waxaynu qormadan kooban ku eegi ...
Jeegantu miyay jirtaa, ma xulufo siyaasadeedba mise waa Cudur! W/Q Muniir Ahmed Cigaal
Jeegantu miyay jirtaa, ma xulufo siyaasadeedba mise waa cudur Ummadda lagu kala qaybiyay. Hadaad Boowe muran ka qabto anaa ku qancinaaya ee qoraalkayga akhri. Dad badan ayaa ku dooda KULMIYE oo tal...
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa kadib markii uu la wareegay hogaaminta dalka waxa uu baa’biyey Wasaaradii Duulista iyo Hawada Somaliland taas oo uu u bedelay hay’ada duulimaadyada iyo maamulka madaa...
Walaalkaa walaalkii makuu arkaa? Somaliland oo 27 sano ka hor ku dhawaaqday in ay go’day jamhuuriyaddii soomaaliyeed ee burburtay qaybteedii kale (haatan Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya) aya...